मोदीको नेपाल भ्रमणपछि मधेस केन्द्रित दलका नेतामा छटपटी, कस्तो बन्ला समीकरण ? – Medianp
मोदीको नेपाल भ्रमणपछि मधेस केन्द्रित दलका नेतामा छटपटी, कस्तो बन्ला समीकरण ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ३०, २०७५१३:१०0
काठमाडौं, ३० वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको तीर्थाटन भ्रमण गरेर शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । मोदी आफ्नै चाहनामा जनकपुर हुँदै काठमाडौं र मुस्ताङको तीर्थयात्रामा निस्केका थिए ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले होटल हायातमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सामूहिक र एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरे । उनले एमाले नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राजपाका शीर्ष नेताहरूसँग र संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादवसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरे ।
एमाले, माओवादी र फोरमको पार्टी अध्यक्षसँग भेटेका मोदीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्यसँग भेट गरेका थिए । खासगरी राजपा र फोरमका नेताहरूकै आग्रहमा मोदीले जनकपुरबाट भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश नम्बर २ को भारतसँग निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको देखाउन मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रयास गरे पनि मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अहिले राजपा नेताहरू तनावमा छन् । खासगरी संविधान संशोधनको विषयमा मोदीले केही बोलिदिहाल्छन् कि भन्ने आश राजपा र फोरमका नेताहरूको थियो । सोही कारण उनीहरूले जनकपुरमा मोदीको खातिरदारी गरेका थिए । तर, मोदीले पाँच मिनेटको सम्बोधनमा केही बोलेनन् ।
जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन समारोहमा कुनै राजनीतिक कुरा गरेनन् । मोदीको भाषण सुनिरहेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिलकुमार झा भन्दै थिए, ‘बेकारमा मोदीलाई बोलाइए छ । मधेसको समस्याबारे केही धारणा भारतको आइहाल्छ कि भनेर हामीले बोलाएका हौं, तर मोदीले संविधान संशोधनबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै फाइदा भयो, अब कसरी मधेसमा राजनीति गर्ने ? समस्या भयो ।’
विगतमा झै भारतले मधेसलाई त्यति मतलव गरेको छैन । बरु केही समयसम्म कम्युनिस्ट सरकारको कामकारबाही केही समयसम्म हेर्ने मुडमा भारत रहेका देखिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारभन्दा बढी कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार हुँदा खातिरदारी हुने र आफूले चाहेको स्वार्थ पूरा गर्न सकिने भएकाले पनि अबको दुई वर्षसम्म ओलीले सहज ढंगले सरकार चलाउने स्थिति देखिएको छ । यदि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएन भने दुई वर्षपछि सत्ता समीकरण हुने प्रबल सम्भावना छ ।
भारतमा दुई दुलहीका एक दुलहा कसरी ?
आमा बन्दाको त्यो क्षण तस्विरमा
सावधान ! यस्तो बानी भएका मानिस चाँडै मर्छन् !